Kpido: vidio mmekọrịta maka azụmahịa | Martech Zone
Kpido: vidiyo na-elekọta mmadụ maka azụmahịa
Anyị ekekọrịtala nnukwu ihe ọmụma na ntanetị maka usoro mmekọrịta maka vidiyo mmadụ, nke a bụ nnukwu ihe ọmụma sitere na Media Octopus na ndụmọdụ maka ịkwanye vidiyo mmekọrịta maka akara gị. Enwebeghị oge ka mma maka akara iji tinye ego na ịmepụta na ikesa ọdịnaya na-eme ka ndị mmadụ na-achị ọchị n'olu dara ụda, na-atụ anya na atụmanya ma ọ bụ na-eche ntutu dị n'azụ olu ha na-akwụsị. Olly Smith, Onye isi azụmaahịa maka
N'ụtụtụ a, anyị zigara ihe kpatara azụmahịa gị kwesịrị iji jiri vidiyo na azụmaahịa. Otu uzo ozo maka ojiji nke vidiyo nke n’enye ndi mmadu aka na nsonaazụ ya bu saiti vidio ndi mmadu, ya na oke nlere na ojiji. Ndị ụlọ ọrụ na-eji usoro ndị a eme ihe ma na-ewepụta ụfọdụ nsonaazụ dị mfe ma dị ịtụnanya nke na-elewanye anya, na-akọrọ ndị ọzọ, na-eme ka nghọta miri emi nke akara ha na ọnụego mgbanwe dị elu. E wezụga Youtube, enwere ọtụtụ